Notanan’ny zandary tao Androhibe Antsahadinta: sarona ireo olona 29 nandeha antsokosoko avy any Ambatolampy | NewsMada
Par Taratra sur 26/05/2020
Nalaza tato ho ato, ao anatin’izao fotoana mampirongatra ny valanaretina Coronavirus izao, ny fisiana andian’olona mitsoaka antsokosoko ny toerana misy azy. Anisan’izany ireto olona miisa 29, avy any Ambatolampy, saron’ny zandary tao amin’ny kaominina Androhibe Antsahadinta, omaly, ireto.
Tra-tehaky ny mpitandro filaminana teny Vontovorona, ny faran’ny herinandro teo, ny fiarabe miisa telo, nitondra antsokosoko olona saika hihazo ny faritra Bongolava, Itasy ary Vakinankaratra. Nanao ny ho afany ireo mpandeha hialana ireo sakana eny amin’iny lalam-pirenena voalohany iny. Nambaran’ny loharanom-baovao iray tamin’izany fa isan’ny kaoperativa mampiasa iny lalam-pirenena voalohany iny ny roa amin’ireo fiara nitondra antsokosoko olona. ”Fiara mpitatira olona eny amin’iny faritra Vontovorona iny”, hoy hatrany ity farany. Taorian’ny tranga, voatazona vonjimaika eny amin’ny zandarimaria ny mpamily hanaovana fanadihadiana. Hatolotra ny fampanoavana izy aorian’izany.
Ankoatra izany, olona miisa 29 voasambotry ny mpitandro filaminana. Avy any Ambatolampy, niditra antsokosoko eto amin’ny faritra Analamanga izy ireo, raha ny fanazavana voaray tamin’ny loharanom-baovao iray. Nanaovana fanadihadiana tao amin’ny kaominina Androhibe Antsahadinta ireo olona ireo. Niarahana amin’ny zandary avy eny Fenoarivo izany. Nambaran’ny loharanom-baovao hatrany fa noheverin’ny vahoaka fa dahalo ireo olona ireo nandritra ny alina. Olon-dratsy izay avy nitsoaka teny Ambohimandry hatrany, hoy hatrany ny loharanom-baovao iray. “Tamin’ny fanadihadiana no nilazany fa hamonjy asa lalankely eny amin’ny kaominina iray eny Atsimondrano izy ireo. Miasa ihany koa amin’ny orinasa iray”, hoy ny fanazavana voaray. Nohamafisiny tamin’izany fa saika hitsena azy ireo ilay kamiao manga hita amin’ny sary eto. Vokany, nanokafana fanadihadiana ny mpamily nitondra izany. Tsy nahazo alalàna ahafana mivoaka anefa izy ireo.
Lalàna amin’ny hamehana ara-pahasalamana
Tsiahivina fa efa misy ny lalàna nametraka ny fahamehana ara-pahasalamana manoloana ny valan’aretina Covid-19. Efa napetraky ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny fitaterana koa ny taratasy ahafahana mivezivezy ho an’ny fiara. Tsy ny rehetra anefa ny mahazo izany fa ireo voakasika sy voatondron’ny fitondram-panjakana ihany. Marihina koa fa isan’ireo faritra voa mafy amin’ny Covid-19 ny faritra Analamanga. Antony maha hentitra ireo tompon’andraikitra samihafa manoloana ny fivezivezena izany, indrindra amin’ireo fiara mpitatitra olona.